स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको विदेश मोहः १४ महिनामा १५ देशको भ्रमण - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ विशेष रिपोर्ट ∕ स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको विदेश मोहः १४ महिनामा १५ देशको भ्रमण
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको विदेश मोहः १४ महिनामा १५ देशको भ्रमण
हेल्थ आवाज आईतबार, २०७६ असोज ५ गते, १८:५६ मा प्रकाशित
काठमाडौं—समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अघिल्लो वर्ष साउनबाट उपप्रधानसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्हाले । मन्त्रालय सम्हालेदेखि गत असार मसान्तसम्म क्याबिनेटबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २८ पटकमा ४२ वटा निर्णय भएका छन् ।
तर, अचम्म लाग्दो त के छ भने २८ पटकमा २० वटा निर्णय भने वैदेशिक भ्रमणमा सहभागिता सम्बन्धि रहेका छन् । जसमा १५ वटा मन्त्री यादवको विदेश भ्रमणसँग मात्रै सम्बन्धित छन् । मन्त्री यादवको १५ मध्ये १३ वटा विदेश भ्रमण क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएको छ (पछिल्ला दुई भ्रमण भदौं र असोजमा भएका हुन्) । गत वर्षको २८ असोजमा टर्की जाने प्रस्ताव र यही वर्षको २ वैशाख युगान्डा जाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकृत गरेको थियो । यसरी उनी विदेश गएको हिसाब गर्ने हो भने सरदर महिनाका एक पटकभन्दा विदेश सयरमा निस्किएको देखिन्छ ।
भ्रमण अस्वीकृत हुनेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल पनि छन् । उनका तीन वटा वैदेशिक भ्रमण मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकृत गरेको पाइएको छ । क्याबिनेटले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवको एउटा भ्रमण स्वीकृत गरेको छ भने एउटा अस्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीको विदेश भ्रमण सम्बन्धी दुई वटा प्रस्ताव क्याबिनेटमा पुगेकोमा एउटा स्वीकृत छ भने अर्को अस्वीकृत गरी मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी अन्य कर्मचारीलाई पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
पछिल्लो असारपछि मन्त्री यादव २ देश भ्रमण गरिसकेका छन् । १७ भदौमा उनी भारतको नयाँदिल्ली गए भने १ असोजदेखि दुई साता लामो अमेरिका भ्रमणमा निस्किएका छन् । गत वर्ष साउनबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय समालेयता मन्त्री यादव चार पटक भारतको नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । त्यसैगरी स्वीट्जरल्याण्ड दुई पटक गइसके भने अमेरिका पनि यो उनको दोस्रो भ्रमण हो । यादव बेइजिङ, इथोपिया, काजकास्तान, थाइल्याण्ड, भियतनाम, बेलायत र कतार गइसकेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै गराएर १५ पटक विदेश गएका यादवको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आधिकारिक तथ्यांकमा भने तीन पटक मात्र विदेश भ्रमणमा गएको उल्लेख छ ।